Umahluko phakathi kwendoda nebhinqa guppy | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | Guppy
Xa siqala ukuba ne-aquarium kwaye sazisa iintlanzi ngaphakathi kuyo, kuyinto eqhelekileyo ukuba nentlanzi yeguppy. Enye yezona ntlanzi zaziwayo nezaziwayo, ngakumbi kwabo baqala kweli hlabathi. Nangona kunjalo, abantu abaninzi banamathandabuzo xa kuziwa ekumiseleni Umahluko phakathi kwentlanzi eyindoda kunye neyasetyhini guppy.
Kule nqaku siza kukuxelela zonke iimpawu zentlanzi yeguppy kwaye yintoni umahluko phakathi kwentlanzi eyindoda neyasetyhini.
1 Intlanzi yeguppy
2 Umahluko phakathi kwentlanzi eyindoda kunye neyasetyhini guppy
3 Umahluko ngombala
Ezi ntlanzi zihlobo lwetropiki kwaye zihlala emanzini amnandi. Bazalelwe eMzantsi Melika kwaye bangabosapho lakwaPoeciliidae. Zidume kakhulu kuba zinombala oqaqambileyo. Imibalabala kangangokuba ibizwa ngokuba yintlanzi yomnyama. Ehlabathini kukho phantse Iindidi ezingama-300 zezi ntlanzi kwaye phantse zonke zineentlobo ezahlukeneyo zemibala, ubukhulu kunye neemilo zomsila.
Ngokuqhelekileyo zizilwanyana ezinoxolo ezihlala ziqubha ngokwamaqela ngalo lonke ixesha. Banokudada abakhutheleyo kwaye uya kubafumana ngokuqhubekayo. Kuyacetyiswa ukuba ii-guppies kwi-aquarium zigcine abantu aba-4 nge-50 yeelitha zamanzi. Ngale ndlela, banokuba nendawo eyoneleyo yokwanelisa iimfuno zabo kwaye bahlala nezinye iintlanzi.
Sihlala sifumana abesilisa beleqa abantu basetyhini ukuze babachukumise. Into efanelekileyo ukuze ubudlelwane phakathi kwezi ntlanzi bube khona ngokwendalo kukuseka umlinganiso wendoda eyindoda nganye kubasetyhini aba-3-4. Ngale ndlela siya kuqinisekisa ukuba abanaxinzelelo. Ukuba ubona ukuba intlanzi yakho iyafihla ngokuqhubekayo, oko kubonisa ukuba iyagula okanye ixinezeleke kakhulu. Uxinzelelo uhlala uvela ngaphezulu kweentlanzi kwi-aquarium okanye ngenxa yokuba iimfuno zabo ziyafezekiswa.
Umahluko phakathi kwentlanzi eyindoda kunye neyasetyhini guppy
Kukho umahluko phakathi kwendoda nebhinqa guppy. Okokuqala Amadoda amancinci kunabafazi kunye nombala oqaqambe ngakumbi, Baye bohlukaniswa kwabasetyhini nge-anal fin, eguqulwe yaba lilungu lokukhuphela (gonopod).
Umahluko wabo wesini awahlukanga ebantwini, njengoko bane-X chromosome kunye ne-Y chromosome. Iintsapho ziyakhula ngokwesondo kwiminyaka eyi-3-4.
Ukuchumisa i-guppy kungaphakathi, i-gonopod yaziswa ekuvulekeni ngokwesini kwabasetyhini, ikothula isidoda, emva koko amaqanda akhula kwisisu ngaphakathi kwesibeleko sowasetyhini. Ukuzalwa kuza xa iqokobhe langaphandle leqanda liphukile. Isini sithatha umndilili weentsuku ezingama-28 nangona inokwahluka ngokuxhomekeke kwizinto ezininzi, njengobushushu bamanzi, isondlo, iminyaka yabasetyhini kunye noxinzelelo anokulufumana.
Xa i-fry izalwa ijikeleze i-4-6 mm ubude, ukusukela ngexesha lokuzalwa kwabo sele besitya ukutya okufanayo okutyiwa yiguppy eyindoda kunye neyasetyhini, nangona kungamanani amancinci. Malunga ne-100 yefry zihlala zizalwa. Gcina ukhumbula ukuba ii-guppies zitya amantshontsho azo, ke ngoko zifuna uncedo lwethu ukuba sifuna naluphi na ulutsha lusinde.
Sigcina njani ifry? Kwiintsuku ngaphambi kokuba bazalwe, i-strand kufuneka yahlulwe kwi-aquarium, sibeka ezinye izityalo ezidadayo kwi-aquarium ukukhusela abancinci nje ukuba bazalwe, sibuyisele ibhinqa kwi-aquarium ephambili.
Singawufumana kwakhona umahluko phakathi kwentlanzi eyindoda kunye neyasetyhini guppy ngombala. Singayifumana imibala engapheliyo kolu hlobo lweentlanzi. Njengoko besesitshilo ekuqaleni kweli nqaku, ezi ntlanzi zibizwa ngokuba zi-rainbow fish. Eyona nto iqhelekileyo kukuba sifumana umbala ongacacanga kwisiqingatha sentlanzi kunye nombala oqaqambileyo ngasemva. Esi sesinye sezizathu zokuba kutheni Le misila ye-guppy yaziwa kakhulu. Kwaye zinemibala eqaqambileyo kwaye ziyabetha.
Ezinye iintlobo zinokufumaneka ngenkangeleko yesinyithi njengoko zinee-iridophores. Ezi ziiseli ezingenambala kodwa zinoxanduva lokubonisa ukukhanya. Zizo ezi seli ezenza le mpembelelo ye-iridescent. Abanye abesilisa banokuba bancinci ngobukhulu kwaye babe nombala ohlwempuzekileyo. Abafazi bathambekele ekuboniseni ngakumbi. Nangona ingeyonxalenye yemiqathango, inokusinceda ukuba sahlule isini sentlanzi ukuze sibe nenxalenye esele siyichazile ngasentla.
Ukuthintela uxinzelelo lwentlanzi, eyona ilungileyo kukugcina umlinganiso wendoda eyindoda kuwo onke amabhinqa ama-3-4. Ngaphandle koko, siya kuba neengxaki kwi-aquarium ngenxa yoxinzelelo olugqithisileyo kumacala omabini. Kwelinye icala, abantu ababhinqileyo bafumana ukukhathazwa okungaphezulu kwabesilisa xa bezama ukubonwabisa. Kwelinye icala, abesilisa baziva benoxinzelelo olukhulu lokukhuphisana nabafazi abakhoyo kwi-aquarium.
Ukwazi umohluko phakathi kwentlanzi yamadoda neyasetyhini inokuba yinto ebalulekileyo xa uvelisa kwakhona ezi ntlanzi kwi-aquarium. Kuya kufuneka uyazi ukuba inzala iyaqandusela kwimazi esiswini sayo. Ukumitha kwayo kuthatha malunga nenyanga. Xa abantwana bezalwa bakhululekile ngokupheleleyo kwaye banako ukondla nokuzimela.
Nangona kunjalo, ezinye iintlanzi zinokutya ezincinci. Ke ngoko kuyacetyiswa ukuba wazi ukuba yintoni umahluko phakathi kwentlanzi eyindoda kunye neyasetyhini guppy ukuya nayo nemazi kwi-aquarium eyahlukileyo. Le aquarium yaziwa ngegama lokuzala.
Ukunyamekela ngokufanelekileyo kwezi zilwanyana, ezi zinto zilandelayo ziyacetyiswa kwi-aquarium:
Ubushushu be-aquarium bujikeleze i-18-28 degrees.
I-PH yamanzi kumanani ama-7-8.
I-dGH (ubunzima) ukusuka kwi-10 ukuya kwi-25 º GH.
Ukondla ama-1 okanye ama-2 amaxesha ngemini.
Utshintsho lwamanzi ngeveki yemizuzu. Iipesenti ezingama-25.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi ungafunda ngakumbi malunga numahluko phakathi kwentlanzi yamadoda neyasetyhini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Guppy » Umahluko phakathi kwendoda nebhinqa guppy